Waxaa loo isticmaalaa keydinta iyo wareejinta muunada bartilmaameedka.
1.Made wax polymer hufan PP.
Qeybta 2-aad ee YouTube-ka waxay adkeysan kartaa xoogga xawaaraha sare ee bartamaha.
Naqshadeynta nudaha dunta gaarka ah waxay bixisaa daboolid heer sare ah waxayna yareysaa halista sumowga wasakhda.
Naqshadeynta dhumucda darbiga 4.Unique si ay ugu adkeysato heerkulka -80 ilaa 120 digrii.
5.Ma jiro enzym-yada DNA / RNA.
Astaamaha Aruuriyaha Dhareerka
Soo ururiyaha candhuufta wuxuu inta badan ka kooban yahay soo ururinta masaska, tuubada sampalka iyo daboolka tuubada. Dheecaanka dhareerka iyo candhuufta ka dib isku darka waxaa lagu keydin karaa heerkulka qolka muddo dheer, saamiga candhuufta DNA / RNA ma waxyeelo. Kuwa candhuufta ururiya waa kuwo deegaanka u roon oo la qaadi karo.
Muunad qaadista candhuufta waa hab aan xanuun lahayn oo aan duullaan lahayn oo lagu helo alaabada DNA / RNA. Qaabkan muunad qaadista ah wax dhib ah uma keeni doono dadka tijaabada ah, waana fududahay in la aqbalo, sidaa darteed noocyada muunad qaadista ee baaritaanka hidda-socodka waa la ballaarin karaa
Waa maxay isticmaalka candhuufta ururiyaha
Kuwa candhuufta soo uruuriya waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo qaado shaybaarka candhuufta ee dheecaanka afka laga qaado laguna keydiyo heerkulka qolka. Ka dib markii muunadda la soo saaro, waxaa loo isticmaali karaa in lagu baaro cudurka ku jira fitamiinada.
Waxaa loo isticmaali karaa baaritaanka aabanimada DNA iyo la socoshada halista cudurada hidde-wadaha iyo dhinacyada kale
* Fudud: Nidaamka ururinta waa mid fudud, dhakhso badan oo fudud in lagu shaqeeyo;
* Is bedbeddeli kara: waxaa si fudud looga soo ururin karaa shaybaarka, rugta caafimaadka, ama xitaa guriga;
* Ku habboon: candhuufta la ururiyey waa mid deggan oo lagu kaydiyey heerkulka qolka, kaas oo ku habboon gaadiidka;
* Aad u balaaran: gaar ahaan wuxuu ku habboon yahay carruurta iyo bukaannada aan buuxin shuruudaha laga qaadayo sambal dhiigga;
* Nabdoonaanta: Soo-ururinta aan-ku-tallaalnayn ee shay-baarka si loo yareeyo fursadda infekshinka;
* Waxtarka sare: ka baaraandegidda muunadda ayaa ku habboon isdaahirinta otomaatigga ah, DNA badan oo tayo fiicanna leh ayaa la heli karaa
* Ururinta aan-faafin iyo soo-dhicin ee unugga bina-aadamka DNA-da dabiiciga ah ee bina-aadamka, oo ay aqbaleen inta badan dadka isticmaala
* Iibinta tooska ah ee warshada, qaabeynta dhaqsaha ah, waxay bixisaa xalal farsamo, keydinta unugyada heerkulka qolka, ma sahlana in hoos loo dhigo DNA
Maya Awood Sharaxaad Daboolka Is-taagnaan Xirxirida / Ctns Madhalays ka dhigida
PC1077 × Uruuriyaha candhuufta × × 200 Ikhtiyaar
PC1054 5ml Tuubada muunad qaadista √ √ 5000 Ikhtiyaar
PC1087 7ml Tuubada muunad qaadista √ √ 5000 Ikhtiyaar
PC1088 10ml Tuubada muunad qaadista √ √ 5000 Ikhtiyaar
PC1054 10ml tube muunad qaadista
PC1077 candhuufta aruuriyaha
Hore: Safka wareega